Manage Akawanda Zviitiko zveWordPress neManageWP | Martech Zone
Muvhuro, Ndira 21, 2013 Douglas Karr
Isu takasainira vatatu vatengi veWordPress muvhiki rapfuura uye kudiwa kuri kuramba kuchikura. Sezvo isu tichiramba tichigadzirisa nekutarisa nzvimbo dzevatengi vedu, inguva yatakatanga kutsvaga sisitimu yekubatsira kuti iite kuti inyatsoita basa. ManageWP iyo yese-inosanganisirwa WordPress manejimendi manejimendi iyo inopa vashandisi izere simba uye izere kutonga mukugadzirisa ingangoita chero nhamba yeWebhusaiti saiti saiti nenzira yakapusa inogoneka.
Imwe-tinya Kuwana - Iyo inonzwisisika-kubaya-imwechete kuwana maneja ako ese eWordPress saiti.
Easy Management - Ongorora kuti ndeapi maWordPress masaiti ane madingindira uye ma plugins anoda kutariswa. Uye nekudzvanya kamwe chete, ese ma plugins uye madingindira anovandudzwa.
Uptime monitoring - Uine premium uptime yekutarisa maturusi, iwe uchave neshuwa kuti yako WordPress saiti inoenderera ichimhanya mushe kuitira kuti bhizinesi rako rirambe richishanda zvizere. Asi kana chimwe chinhu chikatadza kufamba, iwe uchave wekutanga kuziva.
Traffic chenjedzo - Pane mumwe munhu akakurumbira akabatanidza kwauri here? Iko yako yazvino positi yaenda hutachiona? Saiti yako iri kurwiswa ne spam bots? Nesimba redu rekuzivisa chengetedzo, iwe unozogona kuongorora traffic spikes. Iye zvino unogona kuve nechokwadi chekutora mukana wemikana mikuru.
SEO kuongorora - Nei uchishandisa mari pane zvinodhura SEO mapakeji? Isu tinosanganisira zvine simba SEO ongororo maturusi pasina mari yekuwedzera. Shandisa iri ruzivo kuti uzive paumire, uye rishandise kuvandudza yako yekutsvaga injini masosi.
Google Analytics - Kuongorora pane yako saiti mashandiro imhepo ine yedu Google Analytics kusangana. Ese ruzivo rwakakosha iwe rwaunoda kuti utore sarudzo dzakanangana nezvekuti ndeapi madhairekitori ako saiti saiti aunofanira kutora anogara uchiwanikwa kwauri.
Tags: shandisa wordpressWordPress
Ndira 21, 2013 na5: 00 PM
Muvhuro unofadza kwauri!
Ini ndinoda mazuva matatu evhiki-uye kubata pane kumwe kuverenga blog.
Ndinovimba izvi zvinokuwana uchiita zvinotyisa uye netariro uchinakidzwa nekuzorora uye kupenya kwezuva!
Ciao ciao ikozvino ~
PS Yeuka, VECHIDIKI VHIKI rinotanga Kukadzi 1 uye mapaipi ari HUGE pamwe nechero celeb yakanyorwa yevechidiki!